वैज्ञानिकको भविष्यवाणी– ‘अबको ४ हप्तामा विश्व सामान्य अवस्थामा फर्कन थाल्नेछ’ ! – Sandesh Press
May 23, 2021 411
उनले भने ‘हामीले ती सबै बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गरिसकेका छौं जसमा भाइरसको संक्रमण छ तर लक्षण देखिएको छेन । यस्ता बिरामीलाई एसिम्टोम्याटिक केस भनिन्छ । एसिम्टोम्याटिक केसबाट संक्रमण बढ्ने खतरा चीनमा धेरै छैन । किनकि अहिलेसम्म हामीले यसको प्रमाण भेटेका छैनौं
Prevचीनका बरिष्ठ वैज्ञानिकको भविष्यवाणी– ‘अबको ४ हप्तामा विश्व सामान्य अवस्थामा फर्कन थाल्नेछ’ !
Nextकाे-राेनाकाे तेस्रो लहर आएमा बालबालिकालाई बढी जोखिम, अहिलेदेखि नै यस्ता तयारीमा जुटेनाैँ भने सम्हाल्न नसकिने !